Inaan la ciyaaro messi waxay noqon laheyd Ri'yo Rumoowday Verrati oo dareenkiisa ka hadlay ka hor kulanka barce iyo PSG.
Home Horyaalka France Inaan la ciyaaro messi waxay noqon laheyd Ri’yo Rumoowday Verrati oo dareenkiisa...
Inaan la ciyaaro messi waxay noqon laheyd Ri’yo Rumoowday Verrati oo dareenkiisa ka hadlay ka hor kulanka barce iyo PSG.
Xiddiga qadka dhexe ee Paris Saint-Germain Marco Verratti ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay rajada uu ka qabo inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi isla markaana iskula midoobaan kooxda heysata horyaalka Ligue 1.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Messi ayaa qandaraaskiisa dhacay dhamaadka xilli ciyaareedka waxaana xidiga ku guuleystay lixda jeer ku guuleystay Ballon d’Or uu si xoogan loola xiriirinayey kooxda PSG iyo kooxda Premier League ee Manchester City.
Iyada oo mustaqbalka Messi uu xukumayo cinwaannada, xiddigga PSG Verratti wuxuu ka hadlay imaatinkiisa suurtagalka ah ee Paris Dabcan, waxaan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro Messi,” Xiddiga heerka caalami ee dalka Talyaaniga Verratti ayaa u sheegay Canal +.
“In isaga lagu soo daro kooxda waxa ay noqon laheyd wax weyn, hal shay oo dheeri ah oo kubada cagta ay i siin laheyd.
Waxaan kubada siin lahaa Neymar iyo Messi waxaanan gadaal ka joogi doonaa si aan ugu raaxeysto uun daawashada.
PSG iyo Barcelona ayaa ku kulmi doona Champions League 16-ka lugta hore iyadoo lugta hore ay ka dhici doonto Camp Nou 16-ka Febraayo.
Waxay dib ugu midoobi doontaa xiddigii hore ee Barca Neymar, kaasoo dhaliyay lix gool 11 kulan oo Ligue 1 ah xilli ciyaareedkan.
Neymar – oo ka tagay Barca heshiis caalami ah oo dhan 222 milyan euro sanadkii 2017 – ayaa dhaliyay 13 gool tartamada oo dhan.
Verratti ayaa yiri: “Ma nihin doqon, waxaan ognahay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican doorkeena doorkeena waa inaan ku dhigno xaalada ugu fiican ee ugu macquulsan.”.
Waa uu ogyahay markii aan kubada heysto inaan raadinayo isaga. Had iyo jeer wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo si uu u helo kubbadda si wanaagsan.
Kooxda Mauricio Pochettino ee PSG ayaa ku jirta kaalinta seddexaad ee Ligue 1 ka dib 24 kulan seddex dhibcood ayeey ka dambeysa hogaamiyaasha Lille ka dib guushii 2-0 ee Classique ay ka gaareen Marseille.
Previous articleLius Suares oo Rikoor u dhigay horyaalka spian.
Next articleXiddiga kooxda Madrid Hazard oo doonaya inuu ciyaaro shan ilaa iyo lix sano.